Eo am-pelatanantsika ny ho avy no hevitra fanentanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny loha-hevitry ny fankalazana tamin’ity taona 2021 ity dia ny hoe « Eo am-pelatanantsika ny ho avy, ndao hiaraka handray andraikitra ». Manana andraikitra lehibe amin’ny fahatrarana ny tanjona ny tsirairay. Tsy noeritreretina ho zava-dehibe saingy manan-danja eo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona izany fanasana tanana amin’ny savony izany.
Anisan’ny nanamarika ity andro maneran-tany ho an’ny fanasana tanana amin’ny rano madio sy savony ity ilay fiaraha-mihentana sy ny firotsahan’ny daholo be amin’ny fanasana tanana atao isaky ny amin’ny 10 ora maraina.
Niaraka nanatanteraka izany ny rehetra ho an’ny teo Analakely. Nisy ihany koa ny fanentanana tamin’ny alalan’ny dihy mirindra arka ny fomba fiasa flash mob natao mahakasika izany teny Ambohijatovo Ambony misy ny biraon’ny Minisiteran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana. Isany nandray anjara tamin’ny fanentanana ireo skoto zazavavy, Fanilo, Mpanazava, Kiady izay mpiara-miombon’antoka mahatoky hatramin’izay.
Ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony dia fihetsika tsotra nefa mahomby amin'ny ady amin’ny aretina, indrindra fa ny aretim-pivalanana. Saingy mbola maro ireo tsy afaka misitraka izany noho ny fahasahiranana, eo ihany koa ny tsy fahampian-drano noho ny fiovaovan’ny toetr’andro ka mila jerena manokana sy anaovana ezaka mba hanatrarana ny tanjona tian-kendrena.
Ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Mandimbisoa Kleoni no nitarika ny fotoana io zoma maraina io, niaraka tamin’ireo olo-manan-kaja maro sy ireo mpiara-miombon’antoka eo amin’ny sehatry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana.
Ankoatran’ireo fanokafana tamin’ny alalan’ny lahateny nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana dia nisy ny hetsika maro nanamarihana ity fankalazàna ity toy ny lalao maro isan-karazany nahazoan’ireo mpandray anjara loka, ary fanentanana maro hafa toy ny tantara fohy miendrika fanentanana nataon’ireo marionnette géante sy ny dihy mirindra nataon’ireo skoto. Nisy koa ireo ny trano heva nanehoan’ireo mpisehatra vitsivitsy ny asany.